Mandheera: Gudoomiyihii deegaanka Carabiya oo la helay meydkiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa saaka deegaanka Carabiya ee ka tirsan Mandheera, gobolka Woqooyi Bari Kenya lagu aasay gudoomiyihii deegaanka Carabiya Mukhtaar Macallin Ibraahim oo shalay dabley loo maleynayo Alshabaab afduubteen, kadibna shalay galab toogteen.
Masuulkaan ayaa waxaa shalay subax lagala degay gaari marayey inta u dhaxeysa Carabiya iyo Mandheera, waxaana shalay galab la helay meydkiisa.
Dilka mas’uulkaan ayaa kusoo beegmay xilli dhawaanahan dowladda Kenya ay gobolka Woqooyo Bari ka wedday dedaalo amaanka lagu sugayo. Ma jirto cid weli sheegtay dilka mas’uulkaas.